Ogaden News Agency (ONA) – Qowmiyada Tigreegu Maxay u Qaxayaan? “Qore C/raxmaan Cabdullaahi
Qowmiyada Tigreegu Maxay u Qaxayaan? “Qore C/raxmaan Cabdullaahi
Posted by ONA Admin	/ July 28, 2013
Ma kawarheysa Qowmiyada Tigreega ee 20 Sanno soo heysatay talada Ethiopia inay ka qaxaan Ethiopia. Maxaa sabab u ah qaxaas? iyo Fikrado kale oo xaqiiq iyo cilmi baadhis kusameysan lagu eegayo Siyaasada Woyanaha iyo shacabka Tigreega oo Qoraa Mudane Cabdiraxmaan cabdullaahi soo sameyay hoos ka aqriso.
Qaxa Tigreegu waxa uu Calaamad u yahay Burburka Ethiopia.
Wadanka Ethiopia oo ah Dalka ugu badan ee dadkiisu ay qaxaan marka la barbar dhigo guud ahaan wadamada caalamka gaar ahaan Qaarada Afrika ayaa Shantii sano ee ugu dambaysay waxaa ka cararay cadaadiska ay xukuumada wayaanuhu ku hayso shucuubta kala gadisan ee ay gumaysato dad lagu qiyaasay Laba malyan oo Qof oo ubadan Haween, Caruur,Dhalinyaro wax kabaranaysay jaamacadaha iyo Iskuulada,Ganacsato,Aqoonyahano, Siyaasiyiin,Shaqaale Dowladeed iyo Culimo.
Qowmiyadaha sida aadka loo qixinayey ayaa waxaa kamid ahaa Qowmiyada Oromada oo iyadu ah tan ugu badan tiro ahaan shacabka Ethiopian, Sido kale waxaa iyagana si kutalgal ah loo bara kicinayey shacabka Ogaadeeniya oo barakicintaas udheerayd Dil, Dhac, Kufsi iyo dhibaatooyin kale oo aad ufarabadan, xattaa waxaa si aan horay loo arag ubarakacay xoola dhaqatadii iyo beeraleydii kuwaasi oo talaabay xaduudaha Ogaadeeniya ay lawadaagto wadamada dariska ah.
Waxaa jira iyaguna qowmiyado laga bara kiciyey Ethiopia dhex deeda kadib markii ay xukuumada wayaanuhu qasab kaga rartay dhulkii ay ku noolaayeen, kana dhexleen awoowayaashood sida Shucuubta koonfureed dadka la ‘isku yidhaahdo oo ay Woyanuhu ka kireeyeen dhulkoodii shirkado shisheeye ah oo aan u aabo yeelayn dadka masaakiinta ah ee dhulkooda xaqdarada lagaga raray.
Qowmiyada Tigreega oo iyadu ahady tan 19kii sando ee lasoo dhaafay xoogga ku haysatay xukunka Ethiopia ayaa waxa ay shacabka ku nool Ethiopia ka galeen Nabsi aad uwayn , Gobolka Tigreega ayaa marka aad tagto ka gadisan guud ahaan Ethiopiada kale, haday noqon lahayd dhinacyada Dhismaha,Waxbarashada,Caafimaadka,Ganacsiga,Warshadaha iyo Guud ahaanba dhanka nolosha,
Xoogagii la dagaalamayey maamulkii dhiigyacabka ahaa ee Mingisto Hailamaryam ayaa markii ay ka tuureen talada dalka Ethopia Mingiste waxa ay bilaabeen in wax allaale iyo wixii agab Milatari, Warshado iyo dhamaan warshadihii ku yaalay Ethiopia sida Warshadii Sonkorta iyo Sibidhka loo daad gureeyay Gobolka Tigray. Waqtigan socdana dhamaan qandaraaslayaasha iyo lacagaha horumarinta ah ee mucawamada looga helo wadamada ree galbeedka 80% waxaa loo leexsadaa gobolka Tigreega ee woyanuhu kasoo jeedo.
Maamulkii uu horjoogaha ka ahaa Dhiigyacabkii Bakhtiyey sanadkii hore, Malez Zanwi oo kasoo jeeday qowmiyada tigreega ayaa wax walba oo ka dhexeeyey shacabka Ethoipia waxa uu ku gaar yeelay Qowmiyada Tigreega ee uu kasoo jeeday jeeday.
Saami-qaybsiga maalmulka Adis ababa oo ay usinaayeen shacabka Ethiopia hadii si caddaalad ah loo qaybin lahaa ayaa noqday mid ay caydh ka ahaayeen shucuubta kale marka laga reebo Qowmiyada Tigreega oo iyadu ah tan ladhi karo wax waliba iyada ayay gacanteeda ku jiraan.
Hadaba Maxaa sababay in ay maanta ay Qaxaan Da’yarta, Aqoonyahanka iyo Maalqabeenada Tigreegu?
Waxaa ladhihi karaa waxaa sabab u ah dhowr qodob oo kamid yihiin
1- Malez Zanawi oo masraxa siyaasadeed ee Ethiopia kasaaray intii uu noolaa Siyaasi Tigree ah oo booskiisa ka riixan kara, Inkasroo dhulka tigreega uu aad u dhisay hadana qowmiyada tigreega waxa uu kawada dhigay ciidan kaliya. Midaas oo u cuntami weysay dayarta Tigreega oo hada badankoodu u qaxaan wadamada ree galbeedka.
2- Siyaasadii Ethiopia ee ay ku amar kutaaglaynayeen Tigreegu oo si kadis ah gacantooda uga baxaysa kadib markii lagula loolantamay nidaamyo badan oo siyaasi, shucuubta Ethiopiana ay kacdoon siyaasi mid diimeen iyo mid halgan qori caaradiba leh oo ka dhan ah Woyanaha uu ka bilowday guud ahaanba Ethiopia.
3- Dakano Farabadan oo ay ka galeen Qowmiyadaha ku hoosjira cadaadiska Ethiopia. Ninkasta oo Tigree ah oo ku nool wadanka Ethiopia waxaa halis iyo khatar soo food saartay noloshiisa isaga oo loo heysto danbiyada dilka, kufsiga, xidhayga leh ee Woyanuhu kula kacaan shacabka Ethiopia. Midaas oo da yarti ama dadkii shacabka ahaa ee Qowmiyadaas tigreega ka soo jeeda aano loogu heysto, midaasna ay keentay inaysan si xor ah ugu noolaan karin Ethiopia dhexdeeda oo cabsi ku nooladaan.
4- Tigreega oo wax yar ka noqonaya kolkii la eego dadka ku dhaqan Ethiopia. Qowmiyada Tigreega ee talada heysa wadanka Ethiopia waxaa 20 sanno ee lasoo dhaafay ay ku maamulaysay shacabka Ethiopia qeybi oo xukun, iyada oo qowmiyadaha Ethiopia midba meel ku xidhay si hal mar loogasoo wada horjeedsanin. Si kastaba ha ahaate waxaa waqtigan la joogo isu bahaystay dhamaanba shucuubta Ethiopia ku hoos jirta oo hal mar kacdoon wada sameeyay lagaga hortagay qowmiyada tigreega ee taliska Woyanaha hoggaaminaysa oo Ethiopia ka ah 4 million tirada guud 86 million ee ku nool Ethiopia.
5- Halis badan oo u muuqatay inay kusoo wajahantahay laga bilaabo 2015ka
Tan iyo markii uu meesha kabaxay dhiigyacabkii qarnigii 21aad ugu macangagsanaa Malez Zanaawi oo dulmi iyo xaqdaro ku hayey shacabka Ethiopia ayaa waxa kaliya ee uuga tagay qoyskii yaraa ee ka dhashay noqday dakano,
Da’yarta iyo Aqoonyahanka qowmiyada Tigreega ayaa waxaa u muuqatay Mustaqbal madow oo ku soo wajahan shacabkooda kadib markii ay is-tuseen in maanta nidaamkii ku dhisnaa dulmiyga iyo cabudhinta uu gacantooda kasii baxayo , dhammaana daafaha Ethoipai ay ka holcayaan dab ka xoog badan kii xilka lagaga tuuray Mingiste Hailamaryam.
Sidoo kale da’yart Tigreega ayaa waxaa usoo baxday in shacabka Ethiopia maadaama ay dulmi farabadan ka galeen in maanta wax badbaadinaya aysan jirin hadii ay Ethiopia burburto, sidaasi daraadeedna ay lagudboon tahay inay maanta inta aysan kala dhaqaaqin Ethiopia bad-baadiyaaan shacabkooda.
Da’yarta Tigreega ayaa u qaybsamay laba qoybood
1- Qayb ku biirtay dhaq dhaqaaqa kasoo hor jeeda xukuumada wayaanaha oo jiray xiligii uu noolaa Malez Zanaawi kuwaasi oo udagaalamaya sidii ay maamulka Adis ababa uqabsan lahaayeen,
Dhaq dhaqaaqaan oo lagu magacaabo TPDM ayaa sanadihii ugu dambeeyey lasoo baxay cudud ciidan oo sifiican u qalabaysan , kuwaasi oo dagaalo lagalay xukuumada wayaanaha
Jabhadaan oo si fiican uga dhaqa dhaqaaqda gobolka Tigreega ayaa la aamin san yahay inay taageero dhaqaale ka hesho siyaasiyiin iyo ganacsato hadda kamid ah maamulka maqaar saarka ah ee Hailamaryam.
Sida laga soo xigtay sargaal Tigree ah oo kusagan Makale ayaa yidhi “waxaa culays aad ah nagu ah in dhalintii aan labaatankii sano ee lasoo dhaafay nuujinaynay dhiigga shucuubta kale ee Ethiopia in maanta anagii nalaga horkeeno oo aysan nabadbaanidayn” Sargaalkan ayaa isagoo hadalkisa sii wata waxa uu intaasi ku daray “ Maanta Gobolkii Tigreega oo ahaa halka aan kunasan jirnay marka aan kazoo baxno xabbada dhagahanaga ka qiiqaysa ee ka dhacaysa gobolada kale ee Ethiopia ayaa noqday meel aan isagana lagu ladi Karin, cimriganga ma waxaan ku dhamaysanaynaa Xero ciidan dhexdeeda”.
Dhalinyartan ayaa u kacday sidii ay magaca Tigreega u badbaadin lahaayen si bulsha weynta kale ee Ethiopia ku hoos jita u tusaan in Qowmiyada tigreegu raali ka aheyn danbiyada foosha xun ee Woyanaha. Waxayna markaas ku biireen dhaqdhaqaaqa lagu afganbinayo taliska Woyanaha.
2- Qaybta labaad ee dhalinta Tigreega ayaa uqaxday sida shucuubta kale ee Ethiopia iyagoo miciin biday Tahriib.
Wadamada sida aadka ah ay ugu qaxeen da’yarta Tigreegu ayaa waxaa kamid ah wadanka Sucuudiga oo kunool yihiin kumanaan qaxooti Ethiopian ah, Sanadkan oo kaliya ayaa lasheegay in Sucuudiga ay galeen 1015 qaxooti Tigree ah oo isug jiray Haween iyo dad dhalin yaro ah.
Arday udhashay Ogaadeeniya oo wax kabarta wadanka sucuudiga ayaa yidhi ” waxaa fajac nagu noqotay markaan aragnay Tigreegii nasoo qixiyey oo dad-kiisii qaxayaan ayaan waxaan soo xuxuustay Sheeko odhanaysay, “Aabooy waxay igu haysay ayay isku haysaa” waxaana halkaasi iiga soo baxaday in nabsigii ay labaatanaka sano Tigreegu kagalayeen shacabka Ethoipia ay maanta iyagu guranayaan midhahiisii.
Wadamada ay sida qul qulka aha uga qaxayaan Tigreegu waxaa kamid ah wadanka ay xuduud wadaaga yihiin ee Eritrea halkaasi oo lasheegay in ay kusugan yihin hadda qaxooti Tigree ah oo lagu Qiyaasay illaa 190,000 oo qof kuwaasi oo ubadan dad nugul ah, Dhilyaro iyo Aqoonyahan.
Sidoo kale waxa ay aad ugaleen wadamada Djbouti iyo dalka Yeman oo iyadu ah halka ay u sii maraan wadamada khliijka Carabta.
Waxaa kale oo intaas dheer dhamaanba Siyaasiyiinta Tigreegu qoysaskooda iyo caruurtooda u qaaden wadamada Ree galbeedka halkaas oo ay qaxoontinimo ka dalbadeen cabsi ay ka qabaan isbadal dag dag ah oo ka dhaca Ethiopia. Waxaana lasoo oggaaday inay isku dhiibaan dhalasho Eritrean iyaga oo sheegta inay wadankaas kasoo jeedaan.
Qaxootiyadan maahan qaxootiyo Economic oo dhaqaale iyo nolol wanaagsan raadsanaya waa qaxootiyo arrimo nabadgalyo la xidhiidha wadankooda uga soo qaxay.
Haddaba maxaa la gudboon Shacabka Ogaadeeniya maadaama maanta ay qaxayaan qowmiyadii ugu dambaysay ee loo aqoonsana in Ethiopia labaatan kii sano ee lasoo dhaafay ku amar kutaaglaynaysay Ethiopia?
Jawaabta su’aashan waxaan uga tagayaa akharistayaasha maqaalkan.
Qore: Cabdiraxmaan Cabdulaahi
Filimkan Hoose waa Jabhada tigreega TPDM oo u dabaal dagaysa guulo ay ka soohooyeen Woyanaha